I-Deer Head Chihuahua: Umhlahlandlela ophelele we-Breed and Owner - Izinhlobo
I-Deer Head Chihuahua: Umhlahlandlela ophelele we-Breed and Owner
Ama-Chihuahuas eza ngazo zonke izinhlobo nobukhulu. I-Deer Head Chihuahua ingenye yezinhlobo ezimbili zeChihuahua. Okunye ukuhlukahluka yi-Apple Head ethandwa kakhulu.
I-Deer Head Chihuahuas iyinhlobo yamathoyizi anayo ubuso obuthandekayo obufana nenyamazane encane.
Ngaphandle kobukhulu bayo obuncane le nja inobunye bobuntu obukhulu emhlabeni we-canine.
Ungakhohliswa ngosayizi wazo omuhle. Lolu hlobo lomlilo nolwesabekayo alulungile ezinganeni noma njengesilwane somndeni.
AmaChihuahuas anenkani, ayavikela futhi anolaka.
Qhubeka ufunde ukuthola ukuthi ngabe lo mngani ohlekisayo ukufanele yini ...
Okuqukethwe nokuzula okusheshayo
Yini i-Deer Head Chihuahua?
Usuku Ekuphileni Kwalesi Sizukulwane
Deer Head Chihuahua Ubuntu Nesimo
Ibiza malini i-Deer Head Chihuahua?
Ukubukeka kwe-Deer Head Chihuahua
Deer Head Chihuahua Isisindo
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwe-Deer Head Chihuahua
Ungayiqeqesha Kanjani Inhloko Yezinyamazane Chihuahua
IDeer Head Chihuahua iyinhlobo ye-sassy enobuso benyamazane yengane.
Kunezinhlobo ezimbili ezahlukene zalolu hlobo lwenja: i-Apple Head neDeer Head. INhloko Yezinyamazane yaziwa ngogebhezi oluthambile nomlomo omude. Le nja edlalayo igcina yayo ubuntu obufana nomdlwane njengoba iguga futhi inesibindi kakhulu. Lolu hlobo luvumelaniswa ngokuphelele nempilo yasendlini futhi lwenza umlingani omuhle wendawo yokuhlala.
Ukuthandwa: # 33.
Isisindo: 3-6 amakhilogremu.
Intengo: $ 400- $ 1500.
Ubuntu: USassy, ​​oxoxa futhi onesibindi.
Intengo : $ 1,000- $ 1,500
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-11-12
Umndeni Friendly : Yebo
Usayizi : 3-6 amakhilogremu
Chitha : Okulingene
Umsebenzi : Phansi
Intengo : $ 1,500- $ 2,000
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-12-15
Usayizi : 6-11 amakhilogremu
Chitha : Phansi
Umsebenzi : Okulingene
Inhloko Yezinyamazane Chihuahua
Intengo : $ 400- $ 1500
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-14-16
Umndeni Friendly : Cha
I-Chihuahua iyinhlobo yezinja ezilingana namathoyizi ezivela eMexico.
Kunezinhlobo ezimbili zeChihuahua ezihlukaniswe ngokuma kogebhezi nobude besifonyo:
Ama-Deer Heads anezingebhezi ezixegayo nezifinyila ezinde.
Ama-Apple Heads anezingebhezi eziyindilinga nezifinyila ezimfushane.
Lezi zinja zihlukaniswa eqenjini lamathoyizi futhi baziwa kakhulu ngokugibela ukugibela esikhwameni somnikazi wabo. Lolu hlobo lincane futhi lulula ngokwanele ukuthi lungahanjiswa lapho uya khona.
Njengezinhlobo eziningi zamathoyizi le nja yazalelwa ukuba ibe umngane othandekayo nenja yethanga.
Benza isilwane esihle kumuntu ohlala efulethini noma ekhaya elincane.
Noma kunjalo abenzi i- inja enkulu yomndeni . Ubuntu beli pooch ngokuqinisekile abuhambisani nomzimba wayo obucayi. Bangaba ngabaphathi kakhulu futhi bajabule ngakho-ke abalungile ngezingane.
Incane futhi kulula ukuyithwala.
Enye yezinhlobo ezihlala amafulethi kakhulu.
Izidingo zokunakekelwa okuphansi futhi kulula ukuzilungisa.
Ama-bond kalula kakhulu nomnikazi wawo.
Umngane omuhle womuntu ohlala yedwa.
Kungakhala kakhulu, kube nomlomo futhi kube nomphathi.
Akuyona inja yomndeni enhle.
Ubucayi futhi ulimale kalula.
Kungaba nzima ukufaka isitimela.
Unokuluma okungathandeki okumangazayo.
Uma usebenzisa i-Deer Head Chihuahua uzovuswa ekuseni ngu ulimi olunamanzi kancane . Le yindlela umdlwane wakho okutshela ngayo ukuthi sekuyisikhathi sokuqala usuku.
Ngemuva kwesidlo sasekuseni esincane inja yakho izodinga ukuhamba ibanga futhi yenze ibhizinisi layo.
Mkhiphele endaweni yakhe enamanzi ngaphambi kokuthi uqale ngobuningi uzungeze ibhulokhi. Ungamangali lapho uChihuahua wakho ekucela ukuthi umthwale uye naye ekhaya!
Lapho ubuyela ekhaya iseshini yokugona embhedeni iyadingeka. Ngemuva kwalokhu uzobe esekulungele ukukuvumela ukuthi uye emsebenzini.
Inja yakho izophumula ngokuthula ekhreyithini lakhe uze ubuyele ekhaya. Ngemuva kwalokho uzoba owokuqala ukukubingelela emnyango!
Khipha inja yakho ukuyokwenza ibhizinisi layo ufika nje ekhaya.
Ungamangali ngengozi noma ezimbili endlini njengoba edume kanzima ngekhefu lendlu.
Njengoba egijima futhi eqa indlu ngejubane eligcwele akutshela ukuthi sekuyisikhathi sokudlala! AmaChihuahuas athanda ukudlala ibhola endlini futhi asebenzise amaqhinga abo amahle kakhulu.
Ngemuva kwesidlo sakusihlwa sekuyisikhathi sokunye ukuhamba okusheshayo ngaphambi kokushona kwelanga. Gcina lokhu kufushane njengoba kungenzeka ukuthi usekhathele manje.
Mthathe uye naye ekhaya uqonde embhedeni lapho nobabili nikwazi ukusonga niphumule ngaphambi kwesikhathi sokulala.
Imvelaphi kaChihuahua ngokuyinhloko iyimfihlakalo. Zibhekwa njengezizukulwane zohlanga lwakudala lwaseMexico olwaziwa ngeTechichi. Kepha, akwaziwa ukuthi iTechichi yafika kanjani eMexico.
Izinja zeTechichi zinemisebenzi eminingi yobuciko yasendulo kanye nezinsalela ezisukela esikhathini seToltec.
Lapho ama-Aztec efika eMexico ngekhulu le-12 wona waqala ukuzala iTechichi ngosayizi omncane. Lezi zinja zifana kakhulu nosuku lwanamuhla lweChihuahua.
Ngekhulu le-16 iTechichi yayisiphelile.
AmaChihuahuas atholakele futhi eduze kwesifundazwe saseChihuahua ngekhulu le-19 futhi bathole igama labo ngenxa yalokhu.
Abahambi abavela e-United States babuya nayo le nja futhi baba yi-hit esheshayo. Bathola ukuqashelwa kweAmerican Kennel Club ngo-1908.
Akukaziwa kahle ukuthi i-Deer Head Chihuahua ivele nini okokuqala. Kuphephile ukusho ukuthi kungenzeka yavela ngemuva kokuqashelwa kohlobo lweMelika American Kennel Club.
I-Deer Head ayaziwa yi-American Kennel Club njengohlobo oluhlukile.
Amaqiniso Ayisikhombisa Ajabulisayo Ngalesi Sizukulwane
I-Chihuahua iyinhlobo encane kunazo zonke emhlabeni yezinja. Ngomzuzu omncane noma usayizi wetiye angaba mancane njengamasentimitha amathathu kuye kwayisithupha ubude! Ama-Deer Heads makhulu kunamaChihuahuas amaningi futhi awakwazi ukukhuliswa ngosayizi omncane noma wetiye.
Lolu hlobo lungenye yezinhlobo zezinja zokudlala ezithandwa kakhulu e-United States. Babeka # 13 esigabeni samathoyizi kanye no- # 33 esigabeni sokuzala esithandwa kakhulu.
Lolu hlobo lwasendulo lusukela kuma-Aztec. Ukhokho wayo uTechichi ubuyela emuva enkathini yeToltec. Imidwebo eminingi yasendulo nezinsalela zangaphambi kwenkathi yangaphambi kwama-Aztec ifaka lolu hlobo.
Baqanjwa ngegama lesifundazwe saseChihuahua eMexico lapho baphinde batholwa khona.
Uhlobo luthandwa kakhulu ngosaziwayo ababenze baba yizinja zesikhwama semali. UJonathan Ross, Madonna noJennifer Lopez bonke banenja.
IDeer Head ayifanele ukuthola ukwamukelwa noma ukuncintisana kweAmerican Kennel Club. Izinga lokuzala libona kuphela ama-Apple Heads.
I-Feral Chihuahuas isiphenduke inkinga ku isimo sase-Arizona . Lezi zinja kwake kwaba yizilwane zasekhaya ezazikhishwa ngabanikazi bazo futhi seziphenduke zasendle.
Lapho le nja ikhethe wena izokunikeza zonke izingalo okufanele zikunikeze.
Uma ufuna inja emnandi futhi emnene lokhu akuyona inhlobo ekufanele.
I-Deer Head Chihuahua ayifani nezinja eziningi ezihlukanisweni zohlobo lwamathoyizi.
AmaChihuahuas anokuningi ongakusho. Amagxolo abo amafushane e-yappy kuyinto okuzodingeka ukuthi uyijwayele wena nomakhelwane bakho. Bangacindezela kakhulu lapho becabanga ukuthi awulaleli. Ayikho indlela yangempela yokuqeqesha ngokuphelele ukuphuma kule pooch.
Into engcono kakhulu ongayenza ngokukhonkotha okuwuhlupho ukungakunaki.
I-Deer Head Chihuahuas ayilona uhlobo lomphakathi kakhulu noma olunobungane. Bavame ukukhathazeka ngabantu abasha nezilwane ezinkulu. Bangaphinde badudule bezungeze okunye izinhlobo ezincane zezinja .
AmaChihuahuas anolaka ngokumangazayo ngenja yobukhulu bawo. Zingalimaza kakhulu lapho zisesimweni esingesihle.
Iningi labanikazi bokuqala bazithola sebemangazwa ukuthi zingaba nobudlova kangakanani lezi zinja. Ukushintshashintsha kwemizwelo akuvamile futhi nokuziphatha komlomo akuvamile.
Akuyona inja ongayishiya ngokuphepha yodwa isikhathi eside.
Le nja izokhetha umuntu oyedwa okhethekile azosondelana naye futhi yenqabe ukunakwa kusuka kwabanye abantu abaningi. Lesi ngesinye sezizathu sokuthi abasona isilwane esinobungane. AmaChihuahuas futhi mancane kakhulu futhi abucayi ukuthi angaphathwa ngokuphepha yingane. Ziyaziwa ngokuluma lapho iphathwa cishe.
Ngokujabulisayo lolu hlobo akuyona inja efuna umzimba. Zingadlala ngokuqhuma okuncane, kepha azixokozeli ngokweqile. Kuphephile ukuthi zidlale ngaphakathi endlini.
I-Deer Head Chihuahuas ivame ukubiza kakhulu ngamaChihuahuas ukuthenga. Lokhu kungenxa yokuthi abanaso isimo sozalo lwamaMelika eKennel Club.
Ibanga lentengo ephansi le lo mdlwane ungama- $ 400 kuya ku- $ 700 .
Amanani aphezulu asukela ku- $ 800 kuya ku- $ 1,200. Uma ufuna izinhlobo zezinwele ezinde lindela ukukhokha cishe ama- $ 300 ngaphezulu. Intengo yenja endala iphakathi kuka- $ 200 kuya ku- $ 500.
Uma ufisa ukwamukela lolu hlobo endaweni yokukhosela kufanele ulindele ukukhokha phakathi kuka- $ 150 kuya ku- $ 300.
Umdlwane $ 400- $ 1,500
Umuntu omdala $ 200- $ 500
Ukutholwa $ 150- $ 300
Lo mdlwane unebanga lentengo elikhulu ngokuya ngomfuyi, uhlobo lozalo nohlobo lwejazi. Izinhlobonhlobo zezinwele ezinde zizobiza ama- $ 100 kuye ku- $ 300 ngaphezulu kunezinwele ezimfishane.
Lokhu kudaliwe ayifanelekile ekwamukelweni kweMelika yaseKennel Club . Ngenxa yalokhu zivame ukuthengiswa ngaphansi kwe-Apple Head Chihuahua.
Intengo yokuqala engama- $ 400 imaphakathi kwalesi puppy. Imidlwane esezingeni eliphakeme ingabiza phakathi kuka- $ 1,000 kuya ku- $ 1,500.
Lokhu kungenye yezinhlobo eziningi zamathoyizi ezingaba nezinkinga zamazinyo. Uzodinga ukutshala imali eningi ekunakekelweni kwamazinyo ngale nja. Ukuhlolwa kwamazinyo minyaka yonke kuzobiza phakathi kuka- $ 200 no- $ 600.
AmaChihuahuas anenkinga yokuhlala efudumele ebusika ngakho-ke azodinga amajezi ambalwa amahle. Ngenhlanhla le pooch ayikhuli kakhulu futhi lokhu kuzothengwa ngasikhathi sinye cishe ngama- $ 25.
Umehluko kuphela phakathi kweDeer ne-Apple Head yi-skull ne-muzzle shape.
I-Deer Head Chihuahuas inokhakhayi olubanzi oluthambile kuneyincane eyindilinga. Lokhu kungabonakala esithombeni esingenhla.
Isifonyo sabo side kakhulu kune-Apple Heads kepha babelana ngamehlo amakhulu afanayo nezindlebe eziqondile.
Le nja ihamba nge-trotting gait futhi ingagijima ngokushesha okumangazayo.
Lokhu kungenye ye- izinja ezincane kakhulu futhi ezilula kakhulu uzothola.
UChihuahua osayizi ojwayelekile ume phakathi kwamasentimitha amahlanu kuya kwayisishiyagalombili ubude futhi unesisindo esiphakathi kwamakhilogremu amathathu kuya kwayisithupha.
Le nja encane kufanele ungalokothi ube nesisindo esingaphezu kwamakhilogremu ayisithupha . Noma yiluphi uhla lwesisindo luyamukeleka uma nje lungadluli ngaphezu kwamakhilogremu ayisithupha. Amakhilogremu amathathu kuye kwayisithupha ajwayelekile.
Akukho mehluko wosayizi phakathi kwabesilisa nabesifazane.
I-Chihuahuas ingakhula ibe ngamasentimitha ayishumi ubude kepha iningi liphakathi amasentimitha amahlanu nesishiyagalombili ukuphakama . Lokhu kusayizi okuhlangene kanye nokuma komzimba kuvumela ukuthi zithwalwe kalula.
IDeer Head Chihuahua inengubo eyodwa okufushane noma izinwele ezinde . Amajazi amafushane azobe ebushelelezi futhi avale asikiwe emzimbeni. Amajazi amade azobukeka njengosilika futhi egeleza.
Lejazi elilodwa lingaba fawn, grey, mhlophe futhi nsundu.
Ukuchitha kungaphansi kwezinja ezimfishane nezinde.
Ukuxubha njalo kubalulekile ezinjeni ezinezinwele ezinde. Futhi iDeer Head Chihuahuas enezinwele ezinde idinga ukuthi ijazi labo ligundiwe njalo ezinyangeni ezimbalwa.
Okokuqala abanikazi bangakuthola kukhulu ukuziphathisa kwale nja nobuntu be-yappy.
Isimo sengqondo sale nja singesinye sezithiyo ezinkulu ozobhekana nazo. Kuzoba nezikhathi lapho umdlwane wakho ungaba nzima ukuba khona.
Ungalinge uyithathe kancane le nja ngoba incane futhi yinhle!
I-Chihuahua kufanele ihlonishwe.
Singancoma kuphela lolu hlobo kubanikazi abadala abahlala emafulethini noma emakhaya amancane. Ama-Chihuahuas aphathwa ngokwanele ukuba anakekelwe ngabantu abadala bayo yonke iminyaka nezizinda.
Njengoba bebopha kuphela umuntu oyedwa abanikazi abangabodwa benza umngani omkhulu walolu hlobo. Imibhangqwana ingakuthola kunzima lolu hlobo. Baziwa ukuthi banamathela kumuntu oyedwa kuphela okungaholela ekulimaleni kwabanye endlini.
Uma kuqhathaniswa nezinye izinja lolu hlobo lokuzivocavoca, ukudla kanye nokuzilungisa kulula ukunakekelwa.
Lokhu akuyona inqubo ephezulu yezinja.
Amandla abo eza kuphela ngokuqhuma okuncane usuku lonke. Lapho inja yakho ithola ama-zoomies yisikhathi esihle sokumthatha ahambe ayoshaywa umoya noma ayodlala.
Lezi zinja zithanda cishe noma yiluphi uhlobo lomdlalo. Kufanele uzame ukudlala imidlalo enomthelela ophansi njengoba le midlalo izoba ngcono emizimbeni yabo nasemalungeni abucayi.
Fihla ufune ulande ( ngamathoyizi amancane ) yonke imidlalo emikhulu yokudlala ngeChihuahua.
Ngaphezu kwakho konke bathanda nje ukufunda amaqhinga amasha .
I-Deer Head Chihuahua ijabule ngayo ukuhamba imizuzu eyi-10 kuye kweyi-15 nsuku zonke . Ukuqhuma okuncane okuzungeze ibhulokhi kuzolunga.
Yize kungaba kumnandi ukuphatha inja yakho esikhwameni ngezikhathi ezithile, kufanele njalo uyinike isikhathi sokuba izinyawo zayo.
Izinja ezinganikezwa isikhathi esanele sokuhamba zizobe zingafaneleki futhi zingabi nempilo.
Kufanele njalo ugcine i-Chihuahua yakho nge-leash lapho usuhamba ngezinyawo. Banokushayela okuphezulu kokuzingela futhi isimo sabo sokuthwebula singenza babe sengozini yezinja ezinkulu.
Ingqikithi Yomsebenzi Wansuku zonke: Imizuzu engama-30.
Izinga lomsebenzi: 3/5.
Umsebenzi owuthandayo: Amaqhinga
I-Deer Head Chihuahua njengohlobo lwaziwa njengoluphansi kakhulu. Inani lokuzilungisa abazodinga kuya ngobude bejazi labo.
Amajazi amafushane anezinwele adinga kuphela ukuba ibhulashi kanye ngesonto.
Amabhantshi anezinwele ezinde kufanele abhululwe okungenani kabili ngesonto. Ama-Chihuahuas anezinwele ezinde nawo adinga ukuqokwa kokuzilolonga njalo ngenyanga.
Qiniseka ukuthi unikeza inja yakho a ukugeza njalo emavikini amane.
Okubaluleke kakhulu qiniseka ukuthi ukhona ukuhambisana nenhlanzeko yakhe yamazinyo . Inja encane kumele igezwe amazinyo okungenani kanye ngesonto.
Ekugcineni hlanza lezozindlebe ezinkulu ezikhonjiwe nge-swab emnandi kakotini noma ama-baby wipe.
Akufanele usebenzise i-Q-tip ukuhlanza izindlebe zenja.
Ezinye izinja aziwa ngokudla kwawo okunamandla. IChihuahua iphikisana nalokhu futhi yaziwa ngokudla okulula kakhulu.
Ukukhuluphala ngokweqile kuzobeka ubunzima obungadingekile emajoyintini abo futhi kunciphise izinga labo lempilo. Kuyingozi kakhulu kunoma yiluphi uhlobo lwezinja zokudlala.
Ama-Chihuahuas adinga kuphela ukudla inkomishi eyodwa ye-kibble ngosuku.
Uzodinga ukuhlukanisa inkomishi yansuku zonke yale nja ye-kibble ibe yizidlo ezine usuku lonke. Yondla ikomishi lekota njalo.
Zama ukondla kuphela i-kibble eyenzelwe izinja zokuzala ezincane nezamathoyizi. Kuzoba nakho konke okudingwa yinja yakho ngaphandle kokungeza noma yini eyengeziwe.
Inja yakho akufanele ivunyelwe ukufinyelela kunoma yikuphi ukudla okwengeziwe noma izinsalela zetafula.
I-Hypoglycemia ikakhulukazi inkinga ejwayelekile yezinhlobo zezinja ezincane . Kubangelwa lapho bengakutholi ukudla okwanele ukuba bakudle ngokungaguquguquki usuku lonke. Kwenzeka lapho kungekho ukudla okwanele kwamanyikwe ukukhiqiza ushukela owanele.
Yingakho kubalulekile ukondla iDeer Head Chihuahua njalo emahoreni ambalwa emini.
Izimpawu ze-hypoglycemia zifaka:
Uma ubona noma iyiphi yalezi zimpawu kuzodingeka uyise inja yakho kudokotela wezilwane.
Ushukela wegazi ophansi ungavinjelwa ngokondla inja yakho ukudla okuncane okuncane usuku lonke. Esikhundleni sokudla okukodwa okukhulu ekuseni noma kusihlwa.
Izinja ezincane nazo zisengozini enkulu isifo se-periodontal . Isifo se-Periodontal sidalwa ukuhlanzeka okungalungile kwamazinyo okuholela ekwakhiweni kocwecwe olunezinsini.
Ukuphefumula kabi kungenye yezimpawu zokuqala zesifo se-periodontal. Lokhu kuzolandelwa ububomvu nokuvuvukala kwezinsini.
Inja yakho izoba nobunzima ekudleni i-kibble yayo uma inesifo se-periodontal. Ungabona negazi elincane eduze kwesitsha sokudla.
Izinja ezinesifo se-periodontal zizodinga ukuhlanzwa kwamazinyo ngochwepheshe kanye nemithi elwa namagciwane noma imithi elwa nokuvuvukala.
Ukunakekelwa kwenja ngamazinyo kungabiza kakhulu. Qiniseka ukuthi uxubha amazinyo abo okungenani kanye ngesonto ukugcina uqweqwe lungakhiwa.
I-Deer Head Chihuahua Lifespan
I-Deer Head Chihuahuas iphilela Iminyaka eyi-14 kuye kwengu-16 ngokwesilinganiso.
Izinhlobo ezincane zezinja zihlala isikhathi eside kunezinhlobo ezinkulu. Ezinye izinhlobo zetiacup zingaze zenze kube neminyaka engama-20 ubudala.
IChihuahua akuyona inja elula ukuyiqeqesha. Lolu hlobo lunobuntu obunobuhlakani, obungaxoxa nobunesibindi.
Zinzima kakhulu futhi uma kukhulunywa ngokugqekezwa kwezindlu. Uzodinga ukubekezela okuningi ezingozini. Lapho uqeqesha indlu inja yakho qiniseka ukuthi iyayazi indawo enamanzi. Okokuqala thatha inja yakho ukuyokwenza ibhizinisi layo noma nini lapho isiqedile ukudla, ukudlala, ukulala noma ukuhamba.
Ngemuva kwembiza ngayinye ephumelelayo yenza ingxabano enkulu futhi mnikeze okumnandi! Ekugcineni uzoya lapho yedwa.
Lapho uqeqesha inja kufanele sebenzisa ukuqeqeshwa okuhle kokuqinisa kuphela.
Izikhathi zokuqeqeshwa ezimfushane zihamba phambili ukunqanda isimo sabo sobuphathi.
Lolu hlobo aluthembi ngokwemvelo abanye abantu noma izinja ngakho-ke luzodinga ukuxhumana nabantu abaningi kunezinhlobo eziningi. Lokhu kuzosiza ekwehliseni isimilo se-yappy nokuziphatha okubi.
Ngenhlanhla azidingi ukuvuselelwa ngokwengqondo njengezinye izinhlobo zezinja. Ayikaze icele noma yini enye ngaphandle kokuthi ilunge eceleni kwakho. Bayakujabulela ukuchitha isikhathi nawe ngokungafani nokudlala, ukuziqeqesha noma ukuhamba ngezinyawo.
I-Deer Head Chihuahua iyi- isilwane esihle futhi esihlekisayo sasekhaya elifanele.
Afaneleke kakhulu emakhaya abantu abadala kuphela futhi alungele umuntu othanda ukunaka. Uma uhlala wedwa lolu hlobo lwe-sassy oluncane lungaba yilokho okudingayo ukuze uzizwe unesizungu esincane ekhaya.
AmaChihuahuas nawo awekho uhlobo olusebenza kakhulu . Lokhu kubenza inja ephelele yefulethi noma ikhaya elincane edolobheni.
Ngemuva kokuthola i-Deer Head Chihuahua qaphela ukuthi awunikeli izidingo zabo. Ubuntu babo obunobuphathi, obumnandi nobunesibindi bungadala inkinga.
I-Deer Head Chihuahuas yenza ukukhetha okuhle kubantu abadala abafuna umngane omusha. Uma nje ubangenisile bazokuthanda impilo yakho yonke.
Izinhlobo ezingama-18 zeTreddy Bear zezinja zemindeni
UJack Russell Terrier Dog Breed Information and FAQs
Intaba yaseBernese (Inzalo Yezinja Nezinkomba Zomnikazi)
Ngabe i-Corgi Alaskan Malamute ixuba i-hybrid engcono kakhulu kuwe?
Ilebhu YesiNgisi: Umhlahlandlela Ophelele Kule-Show-Ring Labrador Retriever
Ngabe ukuxubana kweGolden Retriever Border Collie kukulungele?
Umhlahlandlela wakho ku-Kunming Wolfdog enamandla
14 Izindawo Zokukhosela Izinja Zikhulume: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthola Inja
I-Maltese Poodle Mix - Umhlahlandlela Wokugcina weMighty Maltipoo
Izintelezi ze-Husky White Eyingqayizivele
Ukuthola Umfuyi Onomthwalo Wemfanelo: Izeluleko Ezi-7 Zokuthenga Inja
Ngabe Izinja Zingadla Ikhabe? Imithetho Emithathu Yokondla
blue heeler lab mix izithombe
ungakwazi ukondla uphayinaphu wenja
izinhlobo ezahlukahlukene zezinhlobo ze-pitbull
izinwele ezinde nezinsundu chihuahua
i-germany lab lab mix amagama
Izinhlobo Imibuzo Evame Ukubuzwa Yizinja Inja Yezempilo Izimpahla Zezinja Ukuqeqeshwa Kwezinja Okufakiwe Amagama Ezinja Ezempilo Ukuqeqeshwa Kwezinja, Okufakiwe